Wax ka ogow taariikhda dacwadda Badda ee ICJ ee Kenya iyo Soomaaliya | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Wax ka ogow taariikhda dacwadda Badda ee ICJ ee Kenya iyo Soomaaliya
Wax ka ogow taariikhda dacwadda Badda ee ICJ ee Kenya iyo Soomaaliya
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay aqbashay una hogaansameyso go’aankii maxakamada Cadaaladda aduunka ee ICJ ee dib loogu dhigay waqtiga dhageysiga dacwadda badda ee kala dhexeeya Kenya.
Raiisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Mahdii Maxamed guuleed ayaa BBC-da u sheegay in inkastoo Soomaaliya ay jacleed in 5 ilaa 12-ka June la qaado dacwada haddana ay garaawsadeen waqtiga lagu jiro oo “aaney suurta gal aheyn marka dhinacyo kala duwan laga eego”.
“Inkasteenu jecleyn kuna doodnay oo ku adkeysannay i Bisha June la maqlo oo maqaal iyo muuqaal lagu dhageysto, haddana anaga doodayadu waxay aheyd in mar walba la maqlo caddaallada oo la dhageysto, balse go’aanka maxkamadda dhinacyadu wey ku qasban yihiin inay qaataan waxay maxkamaddu waqtigan tixgelisay cudurka dilaaga ah ee aafeeyay adduunka,” ayuu yiri Mahdii.
Bishii November, waxaa magaalada Nairobi ku kulmay Uhuru Kenyatta iyo Farmaajo kuwaas oo isku raacay in khilaafka badda uusan saameyn xiriirka labada dal ka dhexeeya. Waxayna ku heshiiyiin in dib loo soo celiyo arrimo ka dheexayay labada dhinac oo xirmay.
Arrintaas ayaa daba socotay khilaaf diblumaasiyadeed oo soo noqnoqday kaas oo ka dhexeeyay labada dowladood. Arrintaas waxaa hurinayay arrimo ku gedaamay dacadda badda ee taalla maxkamadda ICJ.
Dr Afyare Cabdi cilmi oo culuumta siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Qadar ayaa sheegay in dib u dhigista dhageysiga dacwadda badda aysan wax dhibaato ah horseedeyn.
“Soomaalida dabcan wey jeclaan laheyd in waqti hore waxaan lagu kala baxo, hadda ma arko aniga wax weyn oo dhib ah haddiiba weli maxkamdda uu kiiska yaallo,” ayuu yiri.
“Maadama arrinka uu weli taagan yahay hadda dhacdadan waxa hadda Kenya u gaar ah ma aha, wax Soomaaliya u gaar ahna ma aha, waa wax adduunka oo dhan ku wajahan waana wax maxkamadda sida ay u shaqeyn doonto saameyn ku yeelan doona”.
Wuxuu sidoo kale ka dhawaajiyay in maxkamadda Caddaallada Adduunka aysan kiiskan kaliya dib u dhigin isla markaana ay jiraan dacwado kale oo ay dib u dhigtay feyraska Korona awgii.
Taariikhda muranka badda Kenya iyo Soomaaliya
Dacwaddan la xiriirta muranka dhanka xuduudda badda ayaa soo jiitameysay in ka badan 10 sano, balse dowladdii madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bishii July ee 2014-kii, maxkamadda ICJ geysay kiis ka dhan ahaa Kenya oo dooneysa in wadahadal lagu dhammeeyo khilaafka.
Xeerilaaliyaha Soomaaliya Axmed Cali oo BBC-da la hadlayay xilligaasi ayaa sheegay in arrintan ay go’aankeeda gaari karto oo keliya maxkamaddaasi, halka Xeerilaaliyaha Guud ee Kenya ee xilligaasi Githu Muigai uu isagana BBC-da u sheegay in Soomaaliya aysan xaq u lahayn in kiiskan ay geyso maxkamaddaas.
Xeerilaaliyaha Guud ee Kenya wuxuu ku dooday in maxkamadda aysan xaq u lahayn inay go’aan ka gaarto kiiskan. Wuxuu codsaday in arrintan ay labada dal ku xalliyaan wadahadal.
Feb 02, 2018:- Maxkamadda Cadaaladda ee Qaramada Midoobay ayaa go’aan ku gaartay inay dhageysan karto dacwadda ku saabsan muranka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Xaakimiinta Maxkamadda ayaa u codeeyay kiiska ka dib markii ay ka hadleen sharci ahaanta doodda Soomaaliya iyo diidmada Kenya.
Bishii Oktoobar ee sannadkii 2019 : Maxkamadda Caddaallada Adduunka waxay dib u dhigtay dhageysiga kiiska badda oo xilliggaas la qorsheeyay in uu dhaco 4-ta Nofeembar, balse waxay ka dhigtay illaa bisha June ee sannadka 2020-ka.
Waxay sheegeen inay eegayaan xaaladda qeyrul-caadiga ah ee uu sababay xanuunka coronavirus ay go’aansadeen in waqtiga furitaanka dhageysiga kiiska laga dhigo sannadka soo socda ee 2021-ka.
Previous articleDal fasaxay in daawada Malaariyada lagu daweeyo bukaanada Corona
Next articleDHAGEYSO: Amar culus oo lagu soo rogay Shacabka Muqdisho & Arrin looga digay
XOG: Banaanbaxii lagu waday inuu ka dhaco Muqdisho oo Weji kale yeeshay & Sababta
Dagaal khasaare geystay oo saaka ka dhacay gobolka HIIRAAN
Maxaa saakay loo xiray wadooyinka Muqdisho & Abaabul hal dhinac ah oo ka socda?
Wariye laga soo musaafuriyay Puntland oo Muqdisho lagu soo dhaweeyay (Sawirro)
Dhageyso:Somaliland oo sheegtay in Korneyl Caare mudan yahay in la toogto
DHAGEYSO:Dowlada Somalia oo Xabsi Dhigtay dad Arrin Lama filaan ah u aaday Al‐shabaab
Kulanki Madaxweyne Farmaajo iyo Muuse Biixi oo baaqday iyo sababta ka dambeysa
DHAGEYSO:Jubbaland Oo Ku Dhawaaqday Howlgalka Dhan Ah Al-Shabaab
XOG:Hogaamiyaha Al-Shabaab oo lagu arkay mid kamid ah hotelada Muqdisho Asagoo la socdo…
Axmed Madoobe oo Kudhawaaqay Inuu Xayiradii Kaqaaday Golaha Wasiirada DFS..
RW Khayre oo la kulmay Kaaliyaha Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Mareykanka (Sawirro)
Nin Cadaan Ah Oo Warbaahinta Dunida Hadal Heyso Kadib Weerarkii Nairobi Uu Sameeyey Arin Lama Filaan Ah